सैयद मन्त्री बन्दा योगेश किन बाहिरै? - ब्लग - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
समिता लुइँटेल काठमाडौं साउन २३
राज्य सत्तामा थोरै भए पनि युवालाई स्थान दिएको भए ‘युवाका लागि स्थान’ भन्ने नाराको नाक जोगिन्थ्यो कि?
केही दिनअघि बालकुमारीबाट ऊँ अस्पताल जाने नेपाल यातायातमा युवाहरूको एक समूह नै यात्रा गर्दै थियो। नया“ बानेश्वरबाट एक बृृद्धा बसमा चढिन्। एक जना युवा सिटबाट जुरुक्क उठेर ती बृद्धलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘आमा यहाँ बस्नोस्।’
नेपालमा सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने युवाको संख्या पछिल्लो समय बढ्दो छ भन्ने देखाउने यो एउटा प्रतिनिधि दृश्य हो।
पछिल्लो समय सोसल साइन्स पढ्ने युवाहरू इन्टर्नका लागि पशुपति बृृद्धा आश्रममा काम गर्छन्। विदेश जाने अवसर पर्खिरहेका युवा प्राक्टिकलमा नम्बर पाउन सहयोगी भएर काम गर्छन्। र, जो विदेश जान्छन् सायद तिनले पशुपतिमा गरेको दुःख कहिल्यै भुल्दैनन्। आफु गएको देशमा पनि नेपाली युवाले यहाँबाट सिकेको सामाजिक सेवाको भावना देखाएका धेरै उदाहरण पाइन्छन्।
हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि अगस्ट १२ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइँदैछ। यस वर्ष दिवसको नारा सेभ स्पेस फर युथ (युवाका लागि स्थान) राखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् २००० देखि यो दिवस विश्वभर मनाउन थालिएको हो।
हरेक वर्ष फरक–फरक नारासहित यो दिवस मनाउने गरिएको छ। गत वर्ष युथ बिल्डिङ पिस (शान्ति निर्माणमा युवा) भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइएको थियो। युवा शक्तिलाई देश विकासमा बढीभन्दा बढी समाहित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने यो दिवसको मूल उद्देश्य देखिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले १५ देखि २५ वर्ष सम्मका व्यक्तिलाई युवा भनेर परिभाषित गरेको छ। तर, नेपालमा भने १६ देखि ४० वर्ष सम्मकालाई युवा मान्ने गरिएको छ।
मलेसियामा हालै अर्थात् यही सन् २०१८ जुलाई २ मा २५ वर्षका युवालाई मन्त्री बनाइएको छ। ९२ वर्षीय मलेसियाली प्रधानमन्त्री महाथिर बिन मोहम्मद्ले २५ वर्षीय सैयद सिद्दीलाई मन्त्री बनाए। मलेसियाकै पूर्व प्रधानमन्त्री नजिव रजाक सन् १९७८ मा राज्यमन्त्री हुँदा २५ वर्षका मात्र थिए।
यसबाट प्रष्ट हुन्छ संयुक्त राष्ट्रसंघले दिएको युवा परिभाषालाई आत्मसात् गर्दै मलेसियाले युवालाई स्थान दिएको छ। आफ्नो देशमा दुई छाक खाने रोजगारसमेत नपाएर त्यही मलेसियालगायत देश जान बाध्य युवाको देश नेपालले यसबाट कहिले पाठ सिक्ने?
नेपालमा पनि युवा नेता मानिने नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने अवसर पाए। युवा उमेर पार गर्नै लागेका भए पनि मन्त्रीमा गगनको आगमनले युवामा आशा जगाएको थियो। तर नेपालको सत्ताको राजनीतिले उनलाई धेरै समय टिक्न दिएन। त्यस्तै अहिले ओली सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता मानिने योगेश भट्टराई मन्त्री बन्ने हल्लाले युवा उत्साहित भएका थिए। तर त्यो उत्साह उत्साहमै सीमित हुन पुग्यो।
युवा विकास तथा परिचालनका लागि भन्दै २०६५ सालमा पहिलोपटक नेपाल सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थापना गरेको थियो। त्यसयता राष्ट्रिय युवा नीति तर्जुमा गरी युवा विकास र परिचालनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
नेपाल सरकारको १३ औं योजनाको आधारपत्र (२०७०÷०७१–२०७२÷०७३) मा युवालाई उद्यमशील, स्वरोजगार बनाउँदै राष्ट्रिय विकासको नेतृत्व गर्न सक्ने गरी सशक्तीकरण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ। यसैअनुसार युवासँग सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, श्रम तथा रोजगार, खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गरी कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएका छन्।
विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको दबाबमा युवा परिषद् गठन गरी युवा परिषद् ऐन २०७२ समेत जारी भइसकेको छ। युवा परिषद् ऐन जारी भएपछि राष्ट्रिय युवा परिषद् गठनको वैधानिक बाटो खुलेको छ। राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ मा युवा विकाससम्बन्धी व्यापक विषयवस्तुलाई नीतिगत रूपमा समावेश गरिएको छ।
यसैअन्तर्गत नेपाल सरकारले ‘युथ भिजन–२०२५’ ल्याएको छ। संरचनागत विभेद हटाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक युवा तयार गर्ने यो भिजनको मूल उद्देश्य हो। तर यसका नाममा जुन पार्टीको सरकार छ, तिनैका कार्यकर्तालाई पाल्ने–पोस्ने कामबाहेक अरू केही भएको देखिँदैन।
वैदेशिक रोजगारबाट आएको विप्रेशण (रेमिट्यान्स) को पैसाले सिमेन्टका घर, राम्रा लुगाफाटा, मिठा खाना अनि महँगा टिभी, मोबाइलहरू हात–हातमा हँुदैमा देशको विकास हुन्छ त? सोच्नुपर्ने समय आएको छ।
सरकारले वेवास्ता गरे पनि कतिपय नेपाली युवा आफैले देशमै स्थापित हुने र केही गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। कोही कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै स्वदेशमै स्वरोजगार बनिरहेका छन् भने कोही अन्य व्यवसाय गरेर अरू युवालाई समेत रोजगारी दिइरहेका छन्। मुलुकका दुर्गम स्थानका बालबालिकामा शिक्षा र सूचना प्रविधि पु¥याउन तिनै युवा लागेका छन्।
युवा भन्नेबित्तिकै उटपट्याङ र होहल्ला गर्नै, कलेज बंक गर्ने, स्वार्थ र मोजमज्जाका लागि जे पनि गर्न तयार हुने भन्ने आरोपलाई यस्ता उदाहरणले झापड दिएका छन्। युवा वर्ग समाजका लागि केही गर्नुपर्छ भन्नेमा अग्रसर छन् भन्ने कुरालाई हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन।
युवाप्रति सकारात्मक सोचको विकास गरौं र उनीहरूलाई देश विकासमा स्थान दिऔं। अनि मात्र, यही अगस्ट १२ मा मनाउन लागिएको १९औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको नारा सार्थक बन्नेछ।
जय युवा दिवस!
प्रकाशित २३ साउन २०७५, बुधबार | 2018-08-08 17:33:04
समिता लुइँटेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनप्रशासनतर्फ अध्ययनरत छिन्
समिता लुइँटेलबाट थप